सुजातानिवासमा बैठक, कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने अठोट | Rajmarga
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेताले ‘विरासत’ फर्काउने उद्घोष गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक, सुजाता र डा. शेखरबीच मंगलबार भएको भेटमा पार्टीमा पुनः कोइराला परिवारको शक्ति फर्काउने विषयमा कुराकानी भएको थियो।
गत ४ साउनमा कांग्रेस महामन्त्री शशांकको टोखास्थित निवासमा एकसाथ पहिलोपल्ट राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका तीन नेताले सात महिनापछि अब सशक्त ढंगले पार्टीमा प्रस्तुत हुने सहमति गरेका छन्। मंगलबार गिरिजापुत्री सुजाताको मण्डिखाटारस्थित निवासमा शशांक र शेखर कोइरालाले खानासहित तीन घन्टा छलफल गरेका थिए।
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले व्यहोर्नुपरेको नमिठो हारको समीक्षा र कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेबारे कुराकानी भएको थियो। बिहीबारका लागि चुनावी समीक्षासहितका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएपछि भएको कोइराला परिवारका तीन नेताको भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
झन्डै दुई वर्षअघि सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारबाट शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको थियो। महामन्त्रीमा बीपीपुत्र शशांक निर्वाचित भएका थिए। तर, त्यसयताका निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वकै कारण कमजोर भएको र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको तीनै नेताको निष्कर्ष छ।
कांग्रेसनेतृ सुजाता कोइरालाले निर्वाचनपछि पार्टी कमजोर बन्दा आफूहरूलाई चिन्ता भएको भन्दै पुरानै साख र छवि फर्काउन निरन्तर छलफल गरेको जानकारी दिइन्। ‘निर्वाचनपछि कांग्रेसको संगठन कमजोर भएको देखियो। गुट, उपगुट र झगडाको राजनीतिले हामी कमजोर भएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अब सधैँ यसैगरी कांग्रेस कमजोर रूपमा चल्न सक्दैन। कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन हामीले छलफललाई निरन्तरता दिएका हौं।’ तीनवटै निर्वाचनमा पार्टीले अस्वाभाविक हार व्यहोरेको भन्दै हारको समीक्षा गर्दै कारण खोज्ने र समाधानको उपाय पत्ता लगाउन आफूहरू केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।
कोइराला परिवारका तीन नेताले कांग्रेसमा झाँगिँदो गुटका झुन्डझुन्डलाई एउटै कित्तामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने निर्णय गरेका छन्। ‘पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न सकेन, नेतृत्व कमजोर भयो। जसको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर हुनुले देखाएको छ,’ नेता शेखर कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि किन बिग्रियो ? कांग्रेसले विचार गर्नुपर्छ। यसका लागि बलियो कांग्रेस चाहिन्छ। अब झुन्डझुन्डलाई एउटै र पुरानोजस्तो एउटै कित्तामा उभ्याउन तीनजनाले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ।’
नेता शेखर भ्रातृ संगठनका अराजकताको समस्या पहिचान गरी समाधान लाग्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, पार्टी हारबारे जान्न र बुझ्न कारण खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पार्टीमा कमजोरी भएका छन्, तर यसको कारण खोज्न जरुरी छ,’ शेखर भन्छन्, ‘कसैलाई आरोप नलगाई कसबाट गल्ती भयो ? समीक्षा हुनुपर्छ।’
अर्को महिना तीन नेता शेखरनिवास महाराजगन्जमा जम्मा हुँदै छन्। नेतृ सुजाताले अब शेखर कोइरालानिवासमा छलफल हुने जानकारी दिइन्। ‘हामी पालैपालो छलफल गर्दै छौँ। शशांकको पछि मैले गरंँ, अब शेखरदाकोमा छलफल राख्नुपर्छ भनेर मैैले नै प्रस्ताव गरेकी छु,’ उनले भनिन्।
तीन नेता पार्टीमा आफ्नो परिवारको वर्चस्व गुमेको र कांग्रेस कमजोर भएपछि आफूहरू पुनः मिलेर अघि बढ्नुपर्ने साझा सहमतिमा पुगेका छन्। तर, १४औँ महाधिवेशनसम्म कसले नेतृत्व गरेर जाने भन्नेमा टुंगोमा पुगेका छैनन्। अहिले नै नेतृत्वमा दाबेदार देखिँदा आफ्नो पक्षका नेता भड्किन सक्ने भएकाले उनीहरूले कोइरालाहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तत्काल घोषणा गरेर नजाने नीति लिएका छन्। ‘तीनमध्ये जो हुने हो, सहमतिबाटै हुन्छ, तर अहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ शेखरका स्वकीय सचिव थपलिया भन्छन्, ‘जसले नेतृत्व गरे पनि सहमतिबाटै हुन्छ।’
कांग्रेसमा कोइराला विरासत फर्काउन शशांक, सुजाता र शेखरलाई त्यति सहज भने हुनेछैन। नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि अरू प्रभावशाली नेताको झुन्डलाई विश्वासमा लिने र मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, असन्तुष्ट युवा नेताहरूलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौतीपूर्ण छ। पहिले आफ्नै गुटमा रहे पनि १३औँ महाधिवेशनबाट देउवातिर सरेका अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, चन्द्र भण्डारी, फरमुल्लाह मन्सुरजस्ता नेतालाई पनि
पछिल्लो केही दिनयता पौडेल, प्रकाशमान, सिटौला र केसीसहितका नेताहरू संवादमा छन्। यी नेताहरूले कोइरालाविरुद्ध अर्को समूह खडा गर्दा उनीहरूलाई थप असहजता हुनेछ। नेतृत्वमै दाबी गर्न पहिलो तीनमध्ये एकमा सहमति गर्न र दोस्रो देउवालाई टक्कर दिने गरी उपगुटलाई विश्वासमा लिन पनि कोइरालाहरूलाई सहज छैन। १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा लडेर नेता पौडेल पराजित भएका थिए। अब नेतृत्वकै लागि पौडेलले दाबी गर्ने विषय बाहिर आएको छैन। तर, नेता प्रकाशमान सिंहले कोइरालानिकटबाहेकका नेताको छुट्टै गुट बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको चर्चा कांग्रेसमा छ। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: २०१९ देखि बिजुली बेच्नुपर्ने, तर हिउँदमा किन्नैपर्ने
Next post: नेपाली डाक्टरले पत्ता लगाए ‘इबोला’ को औषधि